UJacqueline Bouvier uKennedy-Onassis
UJacqueline Bouvier uKennedy-Onassis, ngokungathandabuzeki, ubhekisela kula mabhinqa abakwazi ukutshintsha imbali yamazwe onke. Okokuqala waba ngumfazi kaMongameli waseMerika, kamva umfanekiso wesimboli, wayemnxusa wonke umntu kunye nento yonke, akukho mntu unokumelana neentsimbi zakhe, ngoxa wayengabonakali kakuhle. U-Jackie wayengumfundisi wezemfundo kunye nomqondo wesitayela, naphezu kokuxhamla kwakhe, ubukhulu besantya esingama-41 kunye nobukhulu bokuqala besifuba, wayesazi indlela yokuzifundisa ngokwakhe, ukuze wonke umntu abone kuye kuphela ubuhle (nangona ukuba uMerlin Monroe kunye neefom zakhe babenomdla ). Inzala yokuqala yaseMelika yaza yazalwa, kwaye kamva umfazi we-Europa umcebisi ocebileyo, waseMelika, kwintsapho ecebileyo e-1923. Le ntombazana yayithandwa nguyise. Ngokuphathelele uyise, wafundisa uYackie omncinci nodadewabo isitayela kwaye wagxininisa ukuba isitala sifanele sibe ngaphezu kwayo yonke into. Xa uJackie wayeneminyaka eyi-11 abazali bakhe bahlukana, kwaye kamva umama washada kwakhona umgidi. Ukususela ebuntwaneni bokuqala, le ntombazana yayihlala kwindawo yokunethezeka, kodwa abazali bakhe babengazange baphathe kakubi kakhulu. Uyise wentombazana, nangona wayetshatile, wamngcatsha unina kaYackie, ngoko ikamva lokuqala uMnu waseMelika ukususela ebuntwaneni lidibene naloo madoda.
Emva kokufumana imfundo entle kwenye yezona ziko-mveliso zase-America ezihloniphekileyo, waqala ukubhala ikholomu eWashington Times-Herald. Emva kwexesha, ikholomu, eyakhokelela uJacqueline Kennedy, yaba yinto ebalulekileyo kwiphephandaba. Kungekudala waba nomdla kwezopolitiko waza waba ngumhlalutyi wezopolitiko, wayehlala eqala ukuya kwiintlanganiso zezopolitiko kunye nabasemagunyeni abatsha nabasemthethweni.
Ngenye imini kwintlanganiso, abahlobo bamzisa kumpolisi omncinane, othembisayo, uJohan Kennedy Jr .. Kungekudala uJacqueline noJohn batshata. Umtshato wabo unomdla kumawaka abantu (1953).
UJacqueline wathonya kakhulu ukubunjwa komsebenzi wakhe wezopolitiko. Ngokukhawuleza umyeni wakhe waba ngumongameli waseMelika, kwaye yena uyindoda yokuqala.
UJacqueline kwimeko yomfazi womongameli akazange aqale ukuguqula umyalelo kwiNdlu ye-White House, kodwa kwakhona waba ngumfanekiso wesimboli. Kuzo zonke iziganeko zentlalo, wabonakala kwimifanekiso eyahlukileyo. Wonke umntu uyazi ukuba uJacqueline ukhetha ukugqoka iimpahla ezivela kwiindwendwe ezinkulu zaseYurophu, wathenga iqoqo ngokupheleleyo, kodwa oko kwakumcaphukisa uYohane, kuba yonke into yakhe yayiya kwiingubo zendoda yokuqala, ngoxa wayeqonda ukuba uJacqueline uyisigqeba sokuthandwa kwakhe kubantu kunye Ekuhambeni kwexesha wayetyenziselwa ukuchitha inkunkuma.
Ukuze ancede umvelisi waseMelika, wathenga iimpahla ezivela kwimpahla eyaziwayo yaseYurophu, wakrazula amathegi kwaye watyha iithegi zeempawu ezidumile zaseMelika. Ukongezelela, wanika iingubo ayezigqoba ngamaxesha amaninzi, kwisandla sesibini, kwaye imali yabuyiselwa kwiakhawunti.
UJohn wayeyindoda yamantombazana kwaye wayehlala ekhohlisa kumfazi wakhe engabonakali nantoni na. U-Jacqueline, ngokuqinisekileyo, wayesazi ngokunyaniseka kwakhe, ekugqibeleni, xa wayemkhohlisa, xa echitha imali yakhe. Akusaziwa ukuba umanyano kaJackie noJohn ujabule, kodwa umphumo wobomi bawo obuthathatyathwe kukuzalwa kwabantwana abane, ababini ababesinda. Ukufa kweentsana ezimbini kwathintela kakhulu kwi-psykie ye-psyche ukuze aphelise intlungu, wayenisela ixesha elifutshane (okwenziwe, akukho mntu wayesazi malunga nalo). Ukumangalisa kukuba uJackie wayengayicutha ipakethe yonke yegayibhi ngosuku, kodwa akukho mntu wayibona.
Ngo-1963, uJohn F. Kennedy wabulawa, wafa. UJackie wayenentlungu embi kwaye iminyaka emihlanu yayigcina isimo sakhe sokulila. Ngeli xesha, wathatha umcimbi kunye noBobby Kennedy, wahlala edibana nomhlobo wakhe omdala u-Aristotle Onassis (owayengumthandi woodadewabo). U-Onassis wayeyintshaba yendlu kaKennedy. Nangona kunjalo, ngexesha lokulila, wamxhasa ngokusemandleni akhe. UJackie wayekhathazekile ngabantwana bakhe, wayengenayo imali kwaye wayefuna umntu onokumkhusela aze anikezele, ngoko ngo-1968 watshata noAristotle Onassis.
Umthonyama waseMerika wathatha isenzo esinjalo sikaJacqueline njengothutho, kuba ungumhlolokazi ongumongameli waseMelika oyithandayo. Wonke umntu wayemelene nomtshato wakhe.
Nangona kukho ukuphazamiseka okunjalo kuluntu, uJackie waqhubeka ehlala kwaye echitha imali. Ukuba ngexesha lokuphila komyeni wakhe wokuqala wachitha amakhulu amabini, ngoko ngexesha lomtshato wakhe wesibini waqalisa ukuchitha izigidi. Ibhiliyali ye-Greek yase-Onassis yamangaliswa yindlela ayifumana ngayo imali eninzi, kwaye ngelixa izinto ayithengayo, akanakuze azigqoke. Emva kweminyaka emininzi yobomi bentsapho ehlangeneyo, u-Onassis noJackie bacolile.
Kungekudala uArisotle waqonda ukuba lo mfazi wayemtshabalalisa aze aqeshe umcebisi ukuba aqale ukuqokelela ubungqina obushushu ngoJackie ukuba amhlukane naye, kodwa ngokukhawuleza unyana wakhe wafa, ngoko uAstotle ngokwakhe. Ngokuphathelele isitayela sikaJacqueline, emva kokuba umtshato kunye nomgidi-mali, watshintsha. Ukuba yindoda yokuqala, wayemthobe kakhulu, eba ngumfazi we-billionaire, waqala ukugqoka ngokugqithiseleyo kwaye echukumisayo. UAristotle noJacqueline bahlala kwihlabathi ezahlukeneyo, wamthanda, waza wavuma ukuthanda. Umtshato wabo wahlala iminyaka eyisi-8, apho bahlala khona iminyaka emininzi ndawonye njengabathandi kwaye baphela ngokufa kuka-Onassis.
Iminyaka embalwa edluleyo, uJacqueline noAristotle bahlala ngokuhlukileyo kwaye emva kokufa kwakhe, wacela imali kwi-Onassis. Ngenxa yoko, wahlawulwa ngeedola ezigidi ezingama-26, wanikela yena nabantwana bakhe ubomi bakhe bonke.
Emva kokufa kwendoda yakhe yesibili, uJacqueline waqala ukukhokela ubomi obuqhelekileyo kunokuba wayemangalele uluntu. Ukuba nesityebi kakhulu, wafumana umsebenzi njengomhleli oncedisayo nge $ 200 ngeveki. Eli xesha lalivuyiswa kakhulu ebomini bakhe, kuba wayenokwenza into ayithandayo kwaye anike ixesha kubantwana.
Ngowe-1993, wafumanisa ukuba unomdlavuza. Kwiminyaka emibini ezayo, wayenzima nesifo, kodwa ngo-1995, esibhedlele nezihlobo, wafa.
UJacqueline Bouvier uKennedy-Onassis wayephila ubomi obuqaqambileyo. Umtshato wakhe oyisibonelo kunye neyona nto intandokazi yaseMerika yayisisiganeko sokunyundela kunye nokucinga. Nangona ukuba uJacqueline noYohane babengazange bakhonkxwe, bayabonwa njengowesibini isibini esonwabileyo. Umtshato wakhe wesibini wawubonakalisa ubuso bakhe bokwenene, obuchasene nobomi bakhe obunomdla kwendima yowesifazane wokuqala.
Nangona wayehlala esindala amadoda akhe nabantwana bakhe, akazange alahlekelwe ngumzimba wakhe aze agcinwe umfanekiso ophezulu. Ayikho ifoto enye apho wayejonge khona, wayehlala ehlala ebonakalayo.
U-Natalia Oreiro - i-biography epheleleyo
Inkwenkwezi yaseHollywood u-Olivia Wilde
Zingaphi ii-tatto ezingenziwa ngu-Angelina Jolie?
Inkwenkwezi yeTV eRoth
Abadlali abalungileyo bexesha lonke
Ieholide yamaOthodoki ngoSeptemba 19: iMihailovo isimangaliso
Taco ngolwimi lweenkomo
Ndingamangaliswa njani umntu elele embhedeni?
Xa uqala ukunika ubisi kubantwana
I-Nu, njengehlobo lokufotela - into eyinkimbinkimbi
Igumbi lokugezela encinci: indlela yokusebenzisa ngokufanelekileyo isikhala
Ziziphi iingcuka eziphuphayo?
I-calori ephantsi, ukutya okumnandi kunye okunempilo ngaphandle kokulimala kumfanekiso
Ukunyamekela ulusu olomileyo lomzimba ngexesha lokukhulelwa
I-Pantyhose ongafuni ukuyithatha
I-salmon egxiliweyo nelayisi kunye nesipinashi
Indlela yokuba yinkosazana ngeveki